DRC: Dib-u-eegista war-saxaafadeedka Isniinta 5 Agoosto 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS DRC: Dib-u-eegista war-saxaafadeedka Isniinta 5 Agoosto 2019 - Afrika
DRC: Dib-u-eegista war-saxaafadeedka Isniinta 5 Agoosto 2019 - Afrika
- Mawduucyada ay ka faa'idaystaan ​​wargeysyada ayaa lagu daabacay Isniinta maanta ah magaalada Kinshasa waxay ka turjumayaan la tashiga Raiisul Wasaaraha Sylvestre Ilunga Ilunkamba ee qaab dhismeedka dowladda.
"Dowladda: Ilunga Ilunkamba ayaa ka tashanaysa! ". Kani waa cinwaanka ay soo bandhigtay FORUM DES AS markii la keenay Isniinta. Maalin kasta oo ah 11th Limete Street ayaa soo warinaysa in Raiiselwasaaraha Sylvestre Ilunga Ilunkamba, uu bilaabay wada tashiyo ku saabsan dhisida kooxdiisa.
Toddobaadkii hore, wuxuu la hadlay laba sarkaal oo ka tirsan xisbiyada siyaasadda. Waxaa loola jeedaa Vital Kamerhe, awoodda dimoqraadiga ee xisbiga midowga umadda (UNC) iyo culeyska culus ee CACH iyo Modeste Bahati, "Taliyaha" Isbahaysiga Isbaheysiga Dimuqraadiga ee Kongo iyo Allies (AFDC-A). Tani waa waxa war-saxaafadeed ay wada saxeexeen isla Sabtidii, oo nuqul ka mid ahi uu gaadhay qoritaanka Forum des As.
Sida lagu sheegay bayaanka, awoodda akhlaaqeed ee AFDC-A waxa ay xustay in joogitaankiisa xafiiska ra'iisul wasaaraha uu qeyb ka ahaa soo dhaweyn sharaf leh. "Wax xiriir ah lama laha wadatashiyada ku aadan sameynta Dowlada".
Isla aragtidaas, LA PROSPERITE wuxuu xusayaa in Raiisul Wasaaraha in muddo ah lagu tusay qulqulka shaqada isku soo dhawaanshaha booqashooyinka kormeerka si uu naftiisa uga quusto dhammaan waxyaabaha dhabta ah ee lagama maarmaanka u ah ficilka ficilka. Dawladda, iyo ku-dhufashada dhagaystayaasha siyaasadeed ee rajada laga qabo dhisidda xukuumaddiisa.
Sabtidan 3 Agoosto 2019, Sylvester Ilunga Ilunkamba ayaa ganacsi la gashay Vital Kamerhe. Labada shaqsiba waxay ka wada hadleen wadatashiga iyo shaqada degdegga ah. Martiqaadka Sylvestre Ilunga ayaa xaqiijiyay in xubnaha siyaasadeed ee isbahaysiga talada haya ay ku mashquulsan yihiin soo jeedinta musharaxnimada Raiisel Wasaaraha oo leh masuuliyada dastuuriga ah ee ah inuu soo dhiso xukuumadiisa.
Dhanka Vital Kamerhe, dowladdu waa meesha isku dirka dadaallada iyo kheyraadka si loo gaaro himilooyinka uu u xilsaaray Madaxa Gobolka si loo haqabtiro baahiyaha dadka reer Kongo ee u codeeyay isbedel.
Cinwaanka: "Ra'iisul Wasaaraha wuxuu dardar gelinayaa wadatashiga", L'AVENIR wuxuu hoosta ka xariiqay inay macquul tahay, haddii ay runtii tahay danta guud ee hagaysa heerka siyaasadeed ee DRC, wadatashiyadaan ma ahan inay waqti badan qaataan. . Tanina gaar ahaan in arrimaha dowladdu u muuqdaan kuwo aan shaqeynaynin. Waa deg deg in dawlad loo sameeyo si ay u xalliso dhibaatooyinka badan ee reer Kongo. Waxaa ka mid ah kuwa ugu riixaya, dhabarka dugsiga oo si xawli ah u socda.
"Bahati wuxuu sheeganayaa" xaq "wasaaradaha 4," AFRICANEWS ayaa warinaysa. Runtii, madaxa AFDC-A wuxuu weydiisanayaa ra'iisul wasaaraha in uu sii daayo qoondada uu ka leeyahay madalkiisa siyaasadeed. Waraaq isaga loogu talagalay, 30 Luulyo 2019, oo ah madaxa AFDC-A wuxuu ku andacoonayaa "xaq" afar jagooyin: kuxigeenka koowaad, wasiiru dowle, wasaarad iyo kuxigeen.
Modeste Bahati ayaa kujira warbixintan. warqadihiisa. Iyo in la sii wado: "Waxaan xaq u leenahay sheegashada xuquuqdeena, gaar ahaan maadaama anaga lafteena aan qayb ka nahay kooxda wada xaajoodka ilaa dhowaan waxaanna ognahay wax ka qabashada iyo dibad baxa".
Sida laga soo xigtay L'OBSERVATEUR, "Le Cach wuxuu ku guuleystaa Arimaha Gudaha, Arimaha Dibadda, Dhaqaalaha iyo Miisaaniyadda". Qirayaha ayaa soo wariyey in su’aasha ugu weyni ay tahay Cach inuu heli karo wasaaradaha qaar.
Jawaabtu waa cad tahay haa. Dhererka wadaxaajoodka ayaa ugu yaraan u suurtogelin doona dhaqdhaqaaqa Tshisekedi-Kamerhe inuu ku guuleysto jagooyinka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Dhaqaalaha iyo Arrimaha Dibadda. Wuxuu sidoo kale ku guuleystay Wasaaradda Miisaaniyadda.
WAAXDA waxay u aragtaa "Ilunga Ilunkamba in uu ka dhex muuqdo FCC iyo CACH". Muuqaal dheer iyo kulul kadib, dagaalka weyn ayaa hada laga dheehan karaa shakhsiyaadka loogu yeero inay qabtaan jagooyinka wasaarada.
Layli ka reebaya Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sisinta uu hayo tandem Kabila-Tshisekedi. Haddii wax walba ay u dhacaan sidii dariiqa heshiiska 29 Luulyo 2019 ee Kempinski Congo River, way adag tahay in la arko sida ra'iisul wasaaraha loo magacaabay uu saameyn ugu yeelan karo xulashada xubnaha dowladdiisa, ayuu qoray wargayska LE POTENTIEL.
Saaxiibkan, qolkiisa socodku waa cidhiidhi in Ilunga Ilunkamba lagu qasbay inuu la shaqeeyo dadka ay ku soo rogi doonaan labada madax ee isbaheysiga 'FCC-CACH', kiiskan Joseph Kabila iyo Felix Tshisekedi.
St Theodore Ngangu Ilenda
(TN / PKF)
DRC: Dib u eegista Saxaafadda Shiinaha Sabtiga 3 Agoosto 2019 - Afrika
DIIWAANKA FOOTBALL MADAXWEYNAHA FOOTBALL EE MONDAY 05 AUGUST 2019 - Fiidyow
David Beckham wuxuu ku raaxeysanayaa waqtiyo wanaagsan gabadhiisa Harper iyo wiilkiisa Cruz, Italy - VIDEO
Lasoco meelaha banaan ee hawadu ka dhaceyso ee NASA banaanka Xarunta Hawada Caalamiga ah ee tooska loo yaqaan - BGR
Ka hel astaamaha ugu muhiimsan ee ka maqnaada Apple Watch oo leh qalabkan Amazon - BGR
Maamulka iskuulka: maxey qabtaan CGS?
TECH & TELECOM1,568
Video dheeraad ah1,331